Best BlockTrade mgbanwe
Best Buy price BlockTrade $ 0.0823099703411 BTT/ETH IDEX
Ahịa ahia kacha mma BlockTrade $ 0.0823099703411 BTT/ETH IDEX
BlockTrade egobere ego ego maka ahia azụmaahịa ọ bụla ma dabere na nguzosi ike nke ọkọnọ na ịrịọ. Ọnụ ọgụgụ ndị na-azụ ahịa na ndị na-ere BlockTrade na onye na-agbanyere ego crypto ọ bụla dị iche. Ekwesịrị ịchọ nchọnchọ BlockTrade site na nyochaa ọnụego mgbanwe nke mgbanwe ego crypto niile ma họrọ nke kachasị mma. Anyị Best BlockTrade mgbanwe peeji na-ahọrọ azụmahịa azụmaahịa na mgbanwe ego niile nke ụwa ma gosipụta nke ugbu a kachasị mma. BlockTrade ịzụrụ ma ree ọnụego.
Best BlockTrade obere akpa
Ka 28, 2020 Kachasị mma ịzụta BlockTrade na Ka 28, 2020 Ọnụ ahịa kacha mma BlockTrade na $ sell_pair ụzọ azụmaahịa na $ sell_market ahịa.
Mpempe akwụkwọ kachasị mma BlockTrade bụ echiche mmadụ n'otu n'otu maka onye ọ bụla nwe ego ego. Mpempe akwụkwọ Crypto - ebe ịchekwa ego crypto. Ejiri obere akpa iji nyefee ego ego n'etiti ndị dị iche iche. Ejiri akpa kacha mma BlockTrade jiri akara ngosi nke nchekwa na ntụkwasị obi kacha mma. Anyị na-amụ ahịa BlockTrade ahịa mgbanwe ego ego ego, anyị wee họrọ azụmaahịa kachasị mma maka ịzụ na ire.
Ụlọ ahịa BlockTrade kacha mma
Ọnụ ego kachasị mma maka ịzụrụ, ire ego ego BlockTrade na 28/05/2020 taa anyị gosipụtara tebụl ndị dị n'elu maka ịdị mfe nghọta. Tebụl nke ọnụego kacha mma BlockTrade na-enye gị ohere ịhụ ọnụahịa BlockTrade dị iche iche na mgbanwe. Nwere ike iji aka gị họrọ mgbanwe nke ego ego na mgbanwe kacha mma ego ego. Ihe ndekọ ntanetị "Kasị mma BlockTrade maka taa 28/05/2020" na-enyocha ọnụego ego ego kachasị mma na ntanetị. BlockTrade ọnụahịa zụrụ ahịa kachasị mma - anyị na-egosi na dollar n'agbanyeghị ego ejiri zụọ ahịa azụmaahịa ahụ.
Tebụl na-egosi taa ọnụahịa BlockTrade nke ọ bụla site na netwọk ego ego. A gbanwere ọnụego mgbanwe maka ọnụọgụ abụọ abụọ na dollar US.
IDEX BTT/ETH $ 0.08231 $ 2 710.87 0.099424 %
Na ibe dị n'akụkụ nhọrọ kacha mma BlockTrade, ego ndị ahụ na-enye ọnụahịa azụmaahịa kacha mma na-egosipụta. Ọnụahịa kachasị mma nke BlockTrade egosiputara n'isi elu nke akwụkwọ ahụ na-akwụghachi ụgwọ nke BlockTrade na dollar. N'aka nri nke ọnụahịa ire kacha mma bụ njikọ dị na onye na-echigharị ebe azụmaahịa ahụ na ọnụahịa kachasị mma nke BlockTrade were. A na-etoliteghị ọnụahịa kachasị mma BlockTrade mgbe ana erere dollar. Maka ego ọzọ ma ọ bụ ego ego, ọnụahịa ere nwere ike ịba uru karịa.
Ọ dị mkpa ịmata ụdị mkpụrụ ego BlockTrade mgbe azụtara ego kachasị mma. Anyị na-egosipụta ozi a n'aka nri nke ọnụego ego ego kacha mma. Nmegharị kacha mma maka ịzụ ma ọ bụ ire BlockTrade dị na tebụl ọrụ anyị. A na-ahọta mgbanwe mgbanwe ego dollar kachasị mma maka ịzụrụ na ire BlockTrade maka ego na ego ego dị iche iche. Jiri nyo nke ego dị iche iche dị na tebụl nke mgbanwe ego ego kachasị mma iji hụ BlockTrade maka ego achọrọ ma ọ bụ ego ego chọrọ.